Britain oo loo diiday ballaarinta duqeymaha Suuriya - BBC Somali
Britain oo loo diiday ballaarinta duqeymaha Suuriya
Image caption dad u dhashay Britain ayaa horey loo sheegay inay ku biireen kooxaha ka dagaallamaya Suuriya
Qorshayaasha dowladda Britain ay ku dooneyso in baarlamaanka ay ku meel mariyaan ogolaanshaha duqeynta Suuriya ayaa u muuqata mid la joojiyay.
Guddiga arrimaha dibadda ee Baarlamaanka, oo u badan xisbiga Conservative ka, waxa uu diiday ballaarinta tallaabada militari ee Britain eek u wajahan dalka Suuriya.
Guddiga waxa uu sheegayaa in ballaarinta dowladda ee duqeymaha ay tahay dhabar jabka howsha muhiimka ah ee lagu soo afjarayo colaadda Suuriya.
Dowladda waxa ay qorsheyneysaa inay hesho aqlabiyadda aqalka Commons-ka, si ay isbedel ugu sameeyaan xeerkii David Carmeron ee guuldareystay sanadkii la soo dhaafay oo aan loo ogolaan duqeymaha Britain ee Suuriya ee bishii August 2013.
Laakiin dadaalkaasi ayaa hadda hakad kala kulmaya aqalka baarlamaanka oo sii kordheysa hubitaan la’aanta uu ka qabo ah ka fogaanshaha ceeb kale..
Warbixin cusub oo ay soo saareen guddiga aqalka baarlamaanka u qaabbilsan arrimaha dibadda oo soo afjaray inaan loo baahnaan doonin ballaarinta tallaabo militariga oo ay ka maqan tahay isku xirka istiraatiijiyad caalami ah oo ka kooban ka adkaanta kooxda la baxday Khilaafada Islaamka iyo xallinta dagaalka sokeeye ee Suuriya.
Xaaladda Suuriya ayaa si degdeg ah isugu badaleysa weerarka xoogga leh ee Ruushka uu halkaasi ku farageliyay iyo wadahadallada nabadda ee caalamka uu dabada ka riixayo ee loo arko in duqeymaha ay faragelin ku yihiin.
Hadaba aqalka Commons-ka waxa ay u muuqdaa inay xoojinayaan dhanka diblumaasiyadda halkii ay halis u codeyn lahaayeen, taas oo ah in Britain ay duqeynta ku biirto.